I-Wpdesigner, i-WordPress iingcebiso - I-Geofumed
I-Wpdesigner, i-Wordpress iingcebiso
NgoSeptemba, 2009 Internet kunye neBlogs
I-WordPress mhlawumbi iqonga elidumileyo lokubloga kubantu abayithatha kakhulu. Ukususela kumzuzwana olawulayo ukwenza ukuba isebenze, kukho ukuxhomekeka rhoqo kwiiplagizi, imixholo, amaqhinga kunye neengcebiso zokukwazi ukukwazi ukusebenza kwazo.
Kuba ezi abasebenzisi Wpdesigner enye indlela umdla, kuba nangona kwiphepha igcine imbonakalo ngokwanelisayo ziingcathu, umbhali kuthatha iminyaka eliqela efundisa amaqhinga esukela template ukusuka ekuqaleni ukuya amacebiso oluphambili kunye itemplates simahla.
Ndatshitshiswa ngumngeniso obizwa nge10 ubumnandi bewebhu isayithi, etafileni esicacileyo ibonisa ukufaniswa kwabanikezeli abalishumi abanikelayo. Ngokuqinisekileyo umntu okhangela indawo yokulala, emva kokubona oku kungena ekugqibeleni ukugqiba isigqibo ngenye yazo kuba phakathi kwezinto eziza kufaniswa noku:
Isiqinisekiso sembuyiselo semali
Ngelishwa iinqununu eziqulathwe kumxholo zihluphekile kwaye zenze ukuba kubonakale ukuba akukho nto ingemva kwebhulogi ekhoyo ukusuka ngoMeyi we-2006. Mhlawumbi ungasebenzisa amanye amaphepha atshwankathela umxholo wawo ekwahlula ukuba yiyiphi inkohliso, iithemplates kunye nezifundo kunokuba uhambe nge-site.
Kodwa ukuba ufuna ukuchitha ixesha lokufunda indlela yokwakha itemplate ye-WordPress ukususela ekuqaleni, iWpdesigner yindawo.
Post edlulileyo«Edlulileyo Iindlela ze-10 zokufumana iinqwelo-moya ezincinci
Post Next Inkqubo Efanelekileyo YomhlabaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-0 kwi "Wpdesigner, TipsPress WordPress"
Aitor Calero García uthi:
Ndivule i-akhawunti kwi-JustHost.com, kwaye ibonakala ibonakala kakuhle. Ukufakela kwe-WordPress kukuchofoza kwe-4 kwaye kunokhetho olongezelelweyo.